गुलियो चिनीको बढी सेवनले हाम्रो स्वास्थ्यमा तितो बेफाइदाहरु निम्त्याउछ – जान्नै पर्ने कुरा - ज्ञानविज्ञान
चिनीका १० बेफाइदा यस्ता छन्
२. तपाईको दिमागलाई मदिरा र कुलतप्रति धकेल्छ
डाइबिटिजदेखि दमसम्मका लागी उपयोगी दालचिनीका अनगिन्ती फाइदाहरु
दालचिनी र तेजपातको स्वाद सुवासिलो र मीठो हुन्छ र यसलाई अधिकतम मसलाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । दालचिनी हाम्रो भान्छामा सजिलै पाइने मरमसला हो । यसलाई प्राय: चियामा हालेर खाने गर्दछ । यसमा फाइबर, क्याल्सियम तथा आइरनको मात्रा बढी हुने गर्दछ । यसले विभिन्न परिकार स्वादिलो बनाउने मात्रै होइन, विभिन्न रोगबाट बचाउने तथा उपचारको काम पनि छन् ।
आयुर्वेदिक, यूनानी र चाइनीज मेडिसिन बनाउन दालचीनीको प्रयोग हजारौँ वर्ष देखि भैइरहेको छ । आज पनि यसलाई कयौँ रोगहरूको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ ।
आयुर्वेदिक एक्सपर्टका अनुहार, दालचीनीको यी ५ उपचार विधि चर्चा गरिएको छ र साथै दालचीनीको प्रयोग कुनै पनिले किसिमले गर्दा फाइदाजनक हुन्छ ।
दालचिनीका केही फाइदाहरु यसप्रकार छन्
दालचिनीको प्रयोगले ब्लड सुगर लेभल नियमित गर्न सहयोग मिल्छ । यसले गर्दा डाइबिटिजका लागि यो प्राकृतिक उपचारका रुपमा लिने गरिएको छ ।
दालचिनीले एलडिएल अर्थात ब्याड कोलेस्ट्रोललाई कम गर्छ, दालचिनी पाउडर महमा मिसाएर पेस्ट बनाई खाएमा धमनीमा कोलेस्ट्रोल जम्मा हुन पाउँदैन । यसबाट हृदयघातको जोखिम कम हुन्छ ।
दालचिनी पाउडरको लेप जोर्नीहरुमा लगाउँदा जोर्नी दुख्ने समस्या कम हुने गर्छ ।
दालचिनीको प्रयोग क्यान्सरको उपचार तथा क्यान्सर हुनबाट रोक्का लागि पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यसमा क्यान्सर सेलको विकास तथा बिस्तारलाई रोक्ने क्षमता हुने अध्ययनहरुले देखाएका छन्।
दालचिनीको प्रयोगले शरीरमा रक्त सञ्चार नियमित हुने गर्छ । यसले गर्दा मेटबोलिजम रेट बढ्छ, जसले मोटोपन कम गर्न सहयोग मिल्छ ।
यस्तै यसमा हुने एन्टिब्याक्टेलिय गुणले दाँत तथा गिँजालाई स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छ । दालचिनीको पाउडरले दाँत मसाज गरेमा दाँत तथा गिँजा सम्बन्धी समस्या कम हुन्छ ।
चिसो लागेको वा रुघाखोकी लागेको अवस्थामा एक चमचा दालचिनी पाउडरलाई एक गिलास पानीमा उमालेर पिउँदा फाइदा हुन्छ ।
दालचिनीको चिया पिउने गरेमा अल्काई रोग निको हुँदै जान्छ र रगत आउन दिदैन ।
एक टुक्रा दालचिनी एक चिम्टी सुठोको धूलो ५ वटा ल्वाङ, आधा चम्चा जिरा हालेर बेसरी उमालेर दिनमा तीन पटक काँडा बनाएर पिउने गरेमा ठिक हुन्छ ।
आधा चम्चा दालचिनीको धूलो, एक चिम्टी मरिचको धूलो, आधा चम्चा जेठीमधुको धुलो, चारवटा कण्ठकारीको फल, दुई चम्चा मिश्री एक माना पानीमा पकाउने र एक चौथाई भएपछि छानेर शिशीमा राख्ने र दिनको तीन पटक विहान/ दिउँसो/ वेलुका खाने गरेमा ठिक हुन्छ ।
चिसोले कपाल दुखेमा
दालचिनी र मरिचको लेप बनाएर विहान/वेलुका निधार र कन्चटमा लगाउने गरेमा चिसोले कपाल दुखेको ठिक हुन्छ ।
सूठो, बाबरी, दालचिनीको काडा बनाएर तातै पिएमा २/४ पटक मै ठीक भएर आउँछ ।
दालचिनीले कोलस्टेरोल घटाउन महत्वपुर्ण सहयोग पुरयाउछ । बिहान दालचिनी तातो पानीमा उमालेर खाँदा एकदम फाईदा पुरयाउछ ।
उमालेको दालचिनी पानीलाई कपडाले छान्ने र दिनमा दुई पटक त्यो पानी पिउने ।
केही दिनसम्म नियमित दालचिनी पानीको सेवन गरेमा कफको समस्या कम हुँदै जान्छ ।
दालचिनीलाई राम्रोसँग पिसेर धुलो बनाउने ।
एक चम्चा दालचिनीको धुलोलाई एक कप पानीमा मिसाउने र राम्रोसँग उमाल्ने ।
दिनदिनै तातोपानीका साथ दालचिनीको धूलो र मह खाँदा शरीरको रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ्छ । यसले शरीरलाई क्यान्सर सेल्ससँग लड्न सहायता पुग्छ ।
जाडोमा रुघाखोकी र ज्वरो भगाउनका लागि दालचिनीको धूलो, मह र मरिच मिसाएर खानुहोस् । यसले रोग हटाउनुका साथै शरीरमा ऊर्जा प्रदान गर्छ ।
दालचिनी महमा मिसाएर खाँदा बान्ता, छेर, अपच, ग्यास, पेट दुखेको, एसिडिटी जस्ता समस्या भगाउँनुका साथै अल्सर पनि निको बनाउँछ ।
एक गिलास पानीमा एउटा सानो चम्चा दालचिनी र मह उमालेर दिनदिनै पिउँदा कोलेस्ट्रोल दुईगुणा घट्छ । दिनदिनै यसको चिया खाँदा तौल कम गर्न सहायता पुग्छ ।
टाउको दुखेको निको पार्न दालचिनी र तेजपातलाई पिँधेर चामलको पीठोमा हालेर सुँघ्नुहोस् । त्यसबाहेक त्यसमा केही थोपा तेल हालेर टाउको मालिश गर्दा पनि पीडा कम हुन्छ ।
मुटुलाई स्वस्थ राख्नका लागि दिनदिनै दालचिनी र मह सेवन गर्नुहोस् । रोटीमा दलेर वा चियामा हालेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
छालाको संक्रमण, पीडा, घाउ र सुन्निएको समस्यामा दालचिनीको तेल प्रयोग गर्नुहोस् । त्यसबाहेक दाँतमा पीडा हुँदा र सास गनाउने समस्या हुँदा पनि दालचिनी मुखमा राखेर चुस्नुहोस् ।
जोर्नी र घुँडामा पीडा
एक महिनासम्म दुईचोटि तातोपानीमा दालचिनी र मह हालेर पीडा भएको ठाउँमा मालिश गर्दा पीडा गायब हुन्छ ।
१. पेटको समस्या
खाने कुरामा अधिक मात्रामा दालचिनीको प्रयोग गर्नु पेटको लागि हानिकारक हुन्छ । यसले पेटमा जलन र ग्याँस पैदा गर्छ । यसबाहेक जो मानिसलाई अल्सर छ उनीहरुले पनि दालचिनी खानुहुँदैन ।
२. गर्भवती महिला
गर्भवती महिलाले दालचिनीको प्रयोग गर्नुहुँदैन । यसको प्रयोगले महिलाको पेटमा एसिडिटी र पिडा हुनेगर्छ । यसबाहेक दालचिनी खानाले समयभन्दा पहिला नै डेलिभरी हुने खतरा रहन्छन् ।
३. लिभर समस्या
लिभरको समस्या भएका व्यक्तिले दालचिनीको प्रयोग गर्नुहुँदैन । यसको प्रयोगले लिभर झन् बिग्रन सक्छ ।
४. रगत पातलो बनाउँछ
दालचिनीको अधिक सेवनले रगत पातलो बनाउने गर्छ । यस्तोमा जो मानिसको रगत पहिला नै पातलो छ उनीहरुले दालचिनी खानु हुँदैन ।
५. त्वचामा जलन
केही महिलाहरु दालचिनीको पेष्ट लगाएर अनुहारमा निखार ल्याउने कोशिस गर्छन् । तर, जो महिलाहरुको छाला संवेदनशिल छ उनीहरुले यसको प्रयोग गर्नुहुँदैन । यसका कारण रेशेज र चिलाउने समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
Don't Miss it के हो आयोडिन ? कस्तो अवस्थामा आयोडिनको एकदमै आवश्यक पर्छ ? जान्नुहोस्
यस्ता छन्, स्वस्थ रहनका लागि केहि स्वस्थ बानी
दुःख लाग्यो, रुनुहोस् रुनुलाई कमजोरीका रुपमा लिइन्छ । भनिन्छ, कमलो मन छ । मनलाई कमलो नै रहन दिनुपर्छ । जब…
कफीले आयु बढाउन सक्ने एक अनुसन्धान अनुसार
एक अनुसन्धान अनुसार आयु लम्बिन सक्ने परिणाम, दिनमा तीनपल्ट कफी पिउनाले । बेलायतको राजधानी लन्डनस्थित इन्टरनेसनल एजेन्सी फर रिसर्च अन क्यान्सर एन्ड इम्पेरियल कलेजका…
अत्याधुनिक जीवनशैलीको सबैभन्दा ठूलो असर मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने गरेको छ । लामो समयसम्म कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, तनाव र घरपरिबारको…
तपाईंलाई पनि कपाल झर्न समस्या र कपाल झरिसकेको छ भने यी दुई घरेलु उपाय अपनाउनुस्
१) नुन र कालो मरिच एक एक चम्चा र नरिवलको तेल पाँच चम्चा मिलाएर कपाल झरेको स्थानसहित टाउकोमा लगाउँदा पनि…